Adɛn Nti Na Yenyinyin Na Yewuwu?
Ɔwɛn-Aban | No. 3 2019
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Cibemba Cinyanja Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Douala Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mbunda Mexican Sign Language Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
ONYANKOPƆN ammɔ nnipa amma wiase sɛ yemmewuwu. Bere a Onyankopɔn bɔɔ yɛn awofo a wodi kan, Adam ne Hawa no, na wɔwɔ adwene ne nipadua a ɛyɛ pɛ, kyerɛ sɛ na wodi mũ wɔ biribiara mu. Sɛnea ɔbɔɔ wɔn no nti, anka seesei wɔda so ara te ase. Yehowa kaa dua bi a na esi Eden turom hɔ ho asɛm kyerɛɛ Adam, na ɛno nti na yɛreka sɛ anka wɔda so ara te ase no.
Onyankopɔn ka kyerɛɛ Adam sɛ: “Da a wubedi [dua no so aba] no, owu na wubewu.” (Genesis 2:17) Sɛ Onyankopɔn bɔɔ Adam sɛ onnyin na onwu a, anka ɛho renhia sɛ ɔde saa ahyɛde yi ma no. Ná Adam nim sɛ, sɛ wanni dua no so aba a, ɔrenwu.
ONYANKOPƆN AMMƆ NNIPA AMMA WIASE SƐ YEMMEWUWU
Turom hɔ de, na nnua pii wɔ hɔ a Adam ne Hawa betumi adi ɛso aba na wɔakɔ so atena nkwa mu, enti na ɛho nhia sɛ wokodi saa dua no so aba. (Genesis 2:9) Sɛ anka awarefo a wodi kan no anni dua no so aba a, anka ɛbɛma obiara ahu sɛ wotiee Onii a ɔmaa wɔn nkwa no. Anka ɛbɛkyerɛ nso sɛ, wogye tom sɛ Onyankopɔn na ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ wɔn nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ.
NEA ƐYƐE A ADAM NE HAWA WUI
Sɛ yɛbɛte nea enti a Adam ne Hawa wui no ase a, gye sɛ yɛhwehwɛ nkɔmmɔbɔ bi a ɛfa yɛn nyinaa ho mu. Satan Ɔbonsam faa ɔwɔ so kaa atosɛm bi. Bible ka sɛ: “Na ɔwɔ yɛ anifere sen wuram mmoa a Yehowa Nyankopɔn yɛɛ wɔn nyinaa. Enti obisaa ɔbea no sɛ: ‘Ɛyɛ ampa sɛ Onyankopɔn kae sɛ munnni turo yi mu dua biara so aba?’”​—Genesis 3:1.
Ɛnna Hawa buaa no sɛ: “Yetumi di turo yi mu nnua so aba. Na mmom dua a esi turo no mfinimfini no aba de, Onyankopɔn aka sɛ, ‘Munnni bi, na mommfa mo nsa nnka na moanwu.’” Afei ɔwɔ no ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ owu na mubewu. Na Onyankopɔn nim sɛ da a mubedi bi no mo ani bebue na moayɛ sɛ Onyankopɔn ahu papa ne bɔne.” Enti nea na Satan reka ne sɛ, Yehowa yɛ ɔtorofo, na na ɔde biribi pa rekame yɛn awofo a wodi kan no.​—Genesis 3:2-5.
Hawa gyee nea Satan kae no dii. Enti ɔhwɛɛ dua no. Ná dua no yɛ no fɛ, na na ɛyɛ akɔnnɔ. Ɔtew n’aba no bi na odii. Afei Bible ka sɛ: “Akyiri yi, bere a ne kunu wɔ ne nkyɛn no, ɔde bi maa no na odii.”​—Genesis 3:6.
Onyankopɔn ka kyerɛɛ Adam sɛ: “Da a wubedi bi no, owu na wubewu.”​—GENESIS 2:17
Bere a Onyankopɔn hui sɛ ne mma a ɔdɔ wɔn yi boapa atew ne so atua no, ne werɛ howee pa ara! Enti dɛn na ɔyɛe? Yehowa ka kyerɛɛ Adam sɛ: “Wobɛsan akɔ dɔte mu, efisɛ emu na woyii wo fii. Woyɛ dɔte na dɔte mu na wobɛsan akɔ.” (Genesis 3:17-19) Wei nti, ‘mfe a Adam dii nyinaa yɛ 930, na owui.’ (Genesis 5:5) Adam wui no, wankɔ soro anaa baabi foforo biara. Ansa na Yehowa de fam dɔte rebɔ no no, na onni baabiara. Enti bere a owui no, ɔbɛyɛɛ te sɛ dɔte a woyii no fii mu no ara; ná nkwa biara nni ne mu. Owui ankasa. Hwɛ sɛnea ɛyɛ awerɛhow!
NEA ENTI A YƐN NYINAA YƐ ABƆNEFO
Esiane sɛ Adam ne Hawa hyɛɛ da yɛɛ asoɔden nti, wɔbɛyɛɛ abɔnefo, na hokwan a na wɔwɔ sɛ anka wɔbɛtena ase daa no nso bɔɔ wɔn. Wɔsesae koraa; wɔbɛyɛɛ nnipa a wɔtɔ sin na wɔyɛ abɔnefo. Nanso asoɔden a wɔyɛe no, ɛnyɛ wɔn nko ara na ɛkaa wɔn. Wɔn mma a wɔwoo wɔn nyinaa nso bɛyɛɛ abɔnefo. Romafo 5:12 ka sɛ: “Ɛnam onipa biako [Adam] so na bɔne baa wiase, na owu nam bɔne so bae, ma owu trɛw kaa nnipa nyinaa, efisɛ wɔn nyinaa ayɛ bɔne.”
Bible ka bɔne ne owu ho asɛm sɛ, “ayɛ sɛ kuntu a ɛkata nnipa nyinaa so no, ntama a wɔde akata aman nyinaa so no.” (Yesaia 25:7) Saa kuntu yi akata nnipa nyinaa so te sɛ mframa bɔne bi a obiara rehome bi. Nokwasɛm ne sɛ, “obiara rewu wɔ Adam mu.” (1 Korintofo 15:22) Wei ma asɛmmisa bi sɔre. Ɛno na ɔsomafo Paulo bisae sɛ: “Hena na obegye me afi nipadua a ɛrekɔ owu mu yi mu?” Obi wɔ hɔ a obetumi agye yɛn anaa?​—Romafo 7:24.
Dɛn Na Ɛbɛma Yɛn Tamfo Owu Afi Hɔ?
Yehowa Nyankopɔn dɔ nnipa, enti wayɛ nhyehyɛe a ɔde begye yɛn afi owu mu. Nea ɔyɛe ne sɛ otuaa agyede bi.
Owu Da Hɔ Ma Nnipa Nyinaa
Nnipa Rehwehwɛ Nkwatenten
Wɔbɔɔ Yɛn Sɛ Yɛntena Ase Daa
Wobɛyɛ Dɛn Anya Asetena a Ɛyɛ Papa Sen Ɛnnɛ De Yi?
Ɛnnɛ Mpo, W’ani Betumi Agye
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN No. 3 2019 | Enti Sei Ara Na Asetena Bewie Yɛn?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN No. 3 2019 | Enti Sei Ara Na Asetena Bewie Yɛn?
No. 3 2019 | Enti Sei Ara Na Asetena Bewie Yɛn?
ƆWƐN-ABAN No. 3 2019 | Enti Sei Ara Na Asetena Bewie Yɛn?